DAEMON Ngwa | January 2020
Isi DAEMON Ngwa
Iji DAEMON Ngwa
Ngwa Daimon Tuls dị mfe iji, mana onye ọrụ ahụ nwere ike ịjụ ajụjụ mgbe ọ na-arụ ọrụ. N'isiokwu a, anyị ga-agbalị ịza ajụjụ ndị a jụrụ ajụkarị gbasara usoro ihe omume DAEMON Ngwaọrụ. Na-aguta iji mụta otu esi eji Diamon Tuls. Ka anyị ghọta otú e si eji atụmatụ dị iche iche nke ngwa ahụ.
Esi ewepu DAEMON Ngwa
Mkpa iwepu mmemme na-ebili na ọnọdụ dịgasị iche iche. Ikekwe, ihe omume ahụ adịghịzi mkpa ma chọọ ịhapụ ohere na diski ike gị. Dị ka nhọrọ - usoro ihe a akwụsịla ịrụ ọrụ ma ọ bụ rụọ ọrụ na njehie. Na nke a, iwepu na ịtinye ngwa ahụ ga-enye aka. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi ewepụ Dimon Tuls - usoro ihe omume nke na-arụ ọrụ na ihe oyiyi disk.
Enweghị ike ịnweta faịlụ DAILON faịlụ oyiyi. Ihe ị ga-eme
Ihe ọ bụla mmemme na ọrụ nke ya nwere ike inye njehie ma ọ bụ malite ịrụ ọrụ na-ezighi ezi. Enweghi nsogbu site na nsogbu a na usoro ihe dị ebube dịka DAEMON Ngwa. Mgbe ị na-arụ ọrụ a, njehie na-esonụ nwere ike ịda: "Enweghị ohere ịnweta faịlụ oyiyi nke DAEMON". Ihe ị ga - eme n'ọnọdụ a na otu esi edozi nsogbu - gụọ na.
Ịwụnye egwuregwu ahụ iji DAEMON Ngwaọrụ
Usoro ihe omume DAEMON Ngwa a na-ejikarị eme ihe mgbe ị na-ebudata egwuregwu ebudatara na Ịntanetị. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ọtụtụ egwuregwu na-edozi n'ụdị oyiyi disk. N'ihi ya, a ghaghị idozi ihe oyiyi ndị a ma meghere. Daimon Tuls zuru oke maka nzube a. Gụọ na ị ga-amụta otu esi etinye egwuregwu ahụ site na DAEMON Ngwaọrụ.
Otu esi emepụta ihe oyiyi disk site na iji Daemon Tools
N'ime oge, ndị ọrụ ole na ole na-eji disks, ọtụtụ ndị na-arụpụta laptọọpụ na-eme ka ha ghara ịnweta ụgbọala. Ma, ọ bụghị na ọ dị mkpa iji ya na mkpokọta nkwekọrịta gị bara uru, n'ihi na o zuru ezu iji nyefe ya na kọmpụta. Taa, anyị ga-elebakwu anya otu esi emepụta ihe oyiyi disk.
Esi kwatuo ihe oyiyi na DAEMON Tools Lite
Daimon Tuls Light bụ ezigbo ngwa maka ịrụ ọrụ na ISO diski ihe oyiyi na ihe oyiyi ndị ọzọ. Ọ na - enye gị ohere ọ bụghị naanị iji gbagoo ma meghee ihe oyiyi, kamakwa ịmepụta onwe gị. Na-agụ na ịmụta otú e si arịgo foto disk na DAEMON Ngwaọrụ Lite. Download ma wụnye ngwa ahụ n'onwe ya. Download DAEMON Ngwaọrụ nwụnye nke DAEMON Ngwaọrụ Lite Mgbe ị na-ebido faịlụ nwụnye, a ga-enye gị nhọrọ nke nsụgharị free na mmalite nke onye akwụ ụgwọ.
Nsogbu na-arị elu ihe oyiyi na DAEMON Ngwa na ngwọta ha
DAEMON Ngwaọrụ bụ otu n'ime usoro kachasị mma iji rụọ ọrụ oyiyi disk. Ma ọbụna n'ụdị usoro mmemme ahụ, e nwere ọdịda. Gụkwuo isiokwu a, ị ga-amụtakwa otu esi edozi nsogbu ndị na-esotekarị mgbe ị na-ebupụta ihe oyiyi na Daimon Tuls. Enwere ike imehie ihe ọ bụghị naanị site na mmemme ahụ na-ezighị ezi nke usoro ihe omume ahụ, kamakwa site na eserese disk ma ọ bụ site na mmemme mmemme.
Onye nje nje SPTD DAEMON Ngwa. Ihe ị ga-eme
Ngwá Agha Ngwá Agha bụ usoro magburu onwe ya maka ịrụ ọrụ na ihe oyiyi disk. Ma, ọbụna ngwọta ngwanrọ dị otú ahụ na-adaba mgbe ụfọdụ. Otu n'ime nsogbu kachasị mma bụ ọkwọ ụgbọala. Ụzọ iji dozie nsogbu dị n'okpuru. Njehie dị otú ahụ adịghị ekwe ka iji usoro ihe omume ahụ - iburu ihe oyiyi, dee ha, wdg.
https://termotools.com ig.termotools.com © DAEMON Ngwa 2020